यी हुन् देशकै नम्बर वान ग्लोबल आइएमई बैंकका मालिक चन्द्र ढकाल, जो जागिर छाडेर व्यावसायिक यात्रामा लागेका थिए ! – " कञ्चनजंगा News "
यी हुन् देशकै नम्बर वान ग्लोबल आइएमई बैंकका मालिक चन्द्र ढकाल, जो जागिर छाडेर व्यावसायिक यात्रामा लागेका थिए !
No Comments on यी हुन् देशकै नम्बर वान ग्लोबल आइएमई बैंकका मालिक चन्द्र ढकाल, जो जागिर छाडेर व्यावसायिक यात्रामा लागेका थिए !
बिहान साढे आठ बजे पानी पोखरीस्थित आइएमई कम्प्लेक्समा पुगेपछि उहाँले घडी हेर्नुभयो र भन्नुभयो, “सरी है, मैले तपाईँहरुलाई धेरै समय त कुराइन ?” तर त्यतिबेला साढे आठ बज्न दुई मिनेट बाँकी नै थियो । उहाँले नै हामीलाई बिहान साढे आठ बजेको समय दिनुभएको थियो । हामी त्यसको दुई मिनेटमात्र अघि त्यहाँ पुगेका थियौँ । उहाँ नजिकका भन्छन्, ‘समय उहाँलाई चिन्ने मापनजस्तै हो । समयसँग उहाँको कुनै सम्झौता हुँदैन ।’ उहाँको टिमका कर्मचारीले अहिलेसम्म उहाँसँग समय छल्न सकेका छैनन् । बैठक होस् या काम, उहाँको उपस्थिति सके अगावै नत्र समयमै हुने गर्दछ ।
त्यसैले नेपालका उदीयमान व्यावसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले हरेक गोष्ठी, बैठक हुन् या मिडियासँगको कुराकानीमा भन्ने गर्नुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका वित्तीय संस्थाका लागि जारी गर्ने या निर्माण गर्ने नीतिलाई सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयनमा ल्याउने हामी नै हौँ । उहाँको यो दावीको पछिल्लो उदाहरण लिँदा सत्य सावित के हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको ‘बिग मर्जर’को नीतिलाई सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयनमा ल्याउने ग्लोबल आइएमई बैंक नै हो । जनता बैँकसँग मर्ज भएपछि यो बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ ।
व्यवसाय थालेका उहाँले भने कार्गो व्यवसायलाई राम्रो सफलताका साथ विदेशमा फैलाउन चाहनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला नेपाली तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उत्पादनको अमेरिकामा राम्रो बजार थियो । कार्गो व्यवसाय विस्तारका लागि उहाँले अमेरिका जाने तयारी गर्नुभयो, भिसा पनि लाग्यो। तर, जापान भएर अमेरिका जाने योजना बनाएका ढकाल एक गाउँले दाइको आग्रहमा १० महिना जापानमै बस्नुभयो र काम गर्नुभयो । “त्यस समय जापानको रोजगारीलाई राम्रो मानिन्थ्यो, ती दाजुको आग्रह भयो र म १० महिनाजति त्यहीँ काम गरेर बसेँ । पछि अमेरिका गइनँ ।” त्यहीँ बस्दा नै विदेशमा बस्ने नेपालीले कमाएको पैसा नेपाल पठाउँदा भोग्नुपर्ने सास्ती र जोखिम थाहा पाउने अवसर मिल्यो उहाँलाई । उहाँपछि भाइ हेमराज पनि सानो काम र व्यवसाय गरेर जापानमै केही समय बस्नुभयो । ढकाल दाजुभाइको त्यही अनुभवको उपजले जन्माएको हो आइएमई।
सरकारले सन् २००१ मा रोजगारीका लागि मलेशिया खुला ग¥यो । धेरै नेपाली गए । त्यसबेला नेपालमा पैसा भित्रिने कुनै कानूनी प्रावधान थिएन। नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अनौपचारिक माध्यमबाट रकम आउने क्रम बढेसँगै चिन्तामा थियो । “यही समस्याको हलका लागि हामीले हाम्रो अनुभवलाई टेकेर ‘इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस’ (आइएमई) खोल्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकसँग ग¥यौँ, जुन सफल पनि भयो । त्यही आइएमई अहिले नेपालको ‘मनी ट्रान्सफर’ को पर्यायवाची हो भन्दा फरक पर्दैन । अहिले मानिस पैसा पठाउन कुनै बैंकमा या अन्य मनी ट्रान्सफर कम्पनीमा पुगेका भए पनि ‘आइएमई गरिदिनुस्’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो हाम्रा लागि ठूलो खुशी हो ।”
← ‘संझना विर्सना’मा पूजा र आकाशको यस्तो गेटअप → बरिष्ठ हाँस्यकलाकार सन्तोष पन्त युवती, रक्सी र प्रेमबिना बाँच्न नसकिने (भिडियोसहित)